Arsenal Oo Xiddig Wacdarro Dhigay Iibinaysa, Real Madrid Iyo PSG Oo Toos U Tartamaya & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga - Gool24.Net
Arsenal Oo Xiddig Wacdarro Dhigay Iibinaysa, Real Madrid Iyo PSG Oo Toos U Tartamaya & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Chelsea ayaa diiday dalab ay ka heshay kooxda Inter Milan oo ka doonaysay saxeexa N’Golo Kante oo ay rabeen inay kaga bedeshaan Marcelo Brozovic oo 27 sano jir ah. (Guardian)
Weeraryahanka kooxda Arsenal iyo xulka Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa Gunners u saxeexi doona qandaraas ka dhigi doona xiddiga ugu mushaharka badan kooxdaas. (Athletic – subscription required)
Manchester United daafaceeda ree England ee Chris Smalling ayaan la tababaranayn kooxdaas waxaana uu kusii dhawaanayaa heshiis rasmi ah oo uu ugu wareegayo AS Roma oo uu xilli ciyaareedkii hore amaah kula joogay. (Telegraph – subscription required)
Kooxda halyeey David Beckham ayaa qarka u saaran saxeexa 32 sano jirka ree Argentina ee Gonzalo Higuain oo ay si xor ah ku qaadanayaan kaddib markii la kansalay heshiiskiisii Juventus. (Sun)
Liverpool khadkeeda dhexe ee Gini Wijnaldum oo 29 sano jir ah ayaa wadahadalo quman la yeeshay tababare Jurgen Klopp xilli qandaraaskiisa kooxdaas hal sano ka hadhay. (Sky Sports)
Daafaca kooxda Tottenham ee Danny Rose oo 30 sano jir ah ayaa ku dhaw inuu ka dhaqaajiyo Spurs oo uu ku biiro kooxda ree Talyaani ee Genoa. (PA, via Team Talk)
West Ham ayaa wadahadalo kula jirta khadkeeda dhexe ee ree England ee Jack Wilshere si ay u kansalaan heshiiska uu 28 sano jirkaasi ku joogo kooxda. (Mail)
Arsenal goolhayaheeda ree Argentina ee Martinez oo 28 sano jir ah ayaa heshiis la gaadhay Aston Villa isaga oo 60,000 oo Pound mushahar u qaadan doona toddobaadkii xilli ay Villa ku dhawaanayso inay 15 Milyan oo Pound kula heshiiso Arsenal. (Independent)
Manchester United khadkeeda dhexe ee Fred oo 27 sano jir ah ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu kooxda ree Turkey ee Galatasaraay u wareegayo xagaagan. (Four Four Two)
West Brom ayaa wadahadalo kula jirta daafacii hore ee kooxda Chelsea ee Branislav Ivanovic oo 36 sano jir ah kaddib markii uu ka tagay kooxda Zenit. (Telegraph – subscription required)
Newcastle United ayaa laga soo diiday dalab 32 Milyan oo Pound ah oo ay ka gudbiyeen khadka dhexe ee kooxda Lille ee Boubakary Soumare. (Fabrizio Romano)
Porto ayaa dalab 22 Milyan ah oo ay ku doonaysay Jesus Corona ka diiday kooxda Wolves, qandaraaska xiddiga ree Mexico ayaa 27 Milyan lagu jabin karaa. (Mail)
Paris St-Germain tababaraheeda Thomas Tuchel ayaa meesha ka saaray in kooxdiisu ay doonayso saxeexa khadka dhexe ee Arsenal ee Matteo Guendouzi oo 21 sano jir ah. (Sun)
Real Madrid ayaa tartan dhinaca saxeexa Eduardo Camavinga kula jirta kooxda PSG, iyagoo raba inay kaga guuleystaan saxeexa 17 sano jirkaas oo kulankiisii ugu horreeyay France ciyaaray Salaasadii (Marca)
Barcelona ayaa heshiiska ay ku doonayso weeraryahanka Lyon ee Memphis Depay ku dartay daafaca midig ee kooxdeeda ee Emerson oo xilli ciyaareedkii hore amaah ku joogay Real Betis. (Mundo Deportivo – in Spanish)